Wasiir Xigeen ka tirsan Puntland & Koox la socotay oo dirqi ku bad baaday ??? – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Wasiir Xigeen ka tirsan Puntland & Koox la socotay oo dirqi ku bad baaday ???
Wararka ka imaanaya magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa sheegaya in ururka Al-Shabaab uu ku gubay magaalada Ulxeed ee deegaanka Calmadow ee gobolkaasi Sanaag gaadhi ciidan.
Gaadhigan ciidan oo ay wateen koox macdan badhayaal Ajnabi iyo Soomaali ah uuna hogaaminayey wasiir ku xigeenka warfaafinta Puntland ayaa la sheegay in ujeedkoodu uu ahaa baadhista macdan laga helay deegaankaasi.
Waxaa la sheegay in kooxda gaadhigani wadatay ay kaga carareen gaadhiga meel tog ah, kadib markii uu bacaad ka galay iyaga oo ka baqay in dadka reer guuraaga ah oo iyaguna dhankooda gadhigaasi u sii ka xeeyey magaalada Ulxeed oo ugu dambeyntii Al-Shabaab ay kaga war heleen kuna gubeen sida la sheegay.
Kooxda oo qorshahoodu ahaa soo saarista macdanta loo yaqaano Dahabka kuna fooganaaa badhisteeda ayaa dib ugu noqday magaaalda Bosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Weli ma jirto cid ka hadashay dhacdadani, waxaana marar kala duwan macdan laga soo saaray deegaano ka tirsan gobolka Sanaag kuwaas oo xiliyada qaarkoodna sababay isku dhacyo dhex maray dhinacyo hubaysan.
Previous Guddiga wadada Ceeldaahir Ceerigaabo ayaa soo gaba gabeeyey waddo carro tuur ah oo isku xireysa Laag
Next M/weyne ku xigeenka Puntland oo ka baaqday Safarkiisii Degmada Boocame Maxa is bedelay?